महरा प्रकरणः प्रहरीले गर्‍यो शाहीको स्वास्थ्य परीक्षण
काठमाडौं, १८ असोज । निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा यौन प्रकरणसँग जोडिएकी रोशनी शाहीको प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ ।
उच्च प्रहरी स्रोतका अनुसार प्रहरीले गुपचुपरुपमा शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराएको हो । शुरुमा महरालाई बलात्कारको आरोप लगाउँदै सञ्चारमाध्यममा बयान दिएकी रोशनीले पछि बयान फेरेकी थिइन् । उनले शक्ति केन्द्रको दबावमा बयान फेरेको आशंका भइरहेको बेला प्रहरी चौकीमा महराकै पक्षमा निवेदन दिएकी थिइन् ।
रोशनी पछिल्लो समय कुनै शक्ति समूहको नियन्त्रणमा रहेको र उनको फेसबुक समेत अरु कसैले चलाइरहेको बुझिएको छ ।
यसैबीच नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले महरालाई पक्राउ गर्नुपरे आफूलाई सोधेर मात्र पक्राउ गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको नेकपाका एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार महरालाई पक्राउ नगर्न पूर्वमाओवादी पक्षबाट दबाव बढेपछि प्रचण्डले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रहरीले भने महरालाई पक्राउ नगरे पनि अभियुक्त कै व्यवहारमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
महरा प्रकरणबारे पत्रकार किशोर श्रेष्ठ लेख्छन्, ‘महराजीको पद गयो, रोशनीजीको भविष्य पनि धराप भयो । प्रहरीले गुपचुप समातेर स्वास्थ्य परीक्षण गरायो ।’
पत्रकार श्रेष्ठले अगाडि लेखेका छन्, ‘कम्युनिस्टका अरु नेता र मन्त्रीहरुकै पनि इज्जत लिलाम हुने लाइनमा । अनेक पात्र-अनेक प्रकरण, लहरो तान्ने पहरो गर्जने !’ श्रेष्ठका अनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको भ्रमणसम्म यो प्रकरणलाई थप नचर्काउने बालुवाटारको रणनीति छ । उनी संकेत गर्दै लेख्छन्,’उत्तरी पाहुनाको भ्रमणसम्म पनि रोकाउने प्रयत्न । धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेल त कति कति ।’
कांग्रेस बैठकः संविधान संशोधनसँगै कोरोना महामारीको चर्चा, बजेटको विरोध
ब्राजिलमा एकैदिन ३० हजारभन्दा बढी कोरोना संक्रमित फेला परे
अमेरिकामा कोरोना कहर, संक्रमितको संख्या १८ लाख नाघ्यो
बायर्न म्युनिखको सानदार जित
इरानबारे अमेरिकाले गरेकाे पछिल्लाे निर्णयप्रति बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीद्वारा आलोचना
लकडाउन जेठ ३२ गतेसम्म लम्ब्याइने, सीमा र विमानस्थल असार १६ सम्म बन्द
भक्तपुर कोरोनामुक्त जिल्ला
राजपाले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्ने
रोजगारी सिर्जना गर्ने र बेरोजगारी हटाउने उचित मोडेल सहकारी
बजेट सन्तुलित छ : नेपाल चेम्बर
शनिबार संक्रमण पुष्टि भएका १८९ जना कुन जिल्लाका कति ? (प्रदेशगत विवरणसहित)
भारतीय पक्षको अवरोधपछि नाप नक्साको काम बाँकी रहेको हो : मन्त्री अर्याल
नेपालमा कोरोना निशानामा २१-३० वर्षका तन्नेरीहरु
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकः संविधान संशोधनको पक्षमा भोट हाल्न संसदीय दललाई निर्देशन
एकजना पनि कोरोनाबाट नगुमाएको ९.७ करोड जनसंख्या भएको भियतनामको कथा
हनोई, १७ जेठ । संसारभरी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसले संसारका सयौं देशहरुलाई प्रभावित बनाएको छ । तर, ९.७ करोडभन्दा बढी...
विद्यार्थीले अर्थमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको तस्बिर जलाए
चितवन, १७ जेठ । समाजवादी विद्यार्थी युनियन चितवनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको तस्बिर...
घरमै बसेर यसरी तिर्नुस् विद्युत्को महसुल
रमेश लम्साल/काठमाडौँ, १७ जेठ । बन्दाबन्दी(लकडाउन)का कारण बिजुलीको बिल तिर्न पाइएन भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ...
भारतमा लम्ब्याइयो तर खुलुलो बनाएर